Samuel Umtiti oo la kulmay eedeymo kala duwan kadib kubaddii uu gacanta ku taabtay kulankii Australia – Gool FM
Samuel Umtiti oo la kulmay eedeymo kala duwan kadib kubaddii uu gacanta ku taabtay kulankii Australia
(France) 16 Juunyo 2018. Difaaca xulka qaranka France Samuel Umtiti ayaa helay dhaleeceen kadib markii uu si toos ah sabab ugu noqday rigoodhe lagu ciqaabay xulka France kulankii ay kula ciyaareen Australia koobka aduunka kaasoo kusoo idlaaday 2-1 ay guusha ku raacday wiilasha Didier Deschamps.
Samuel Umtiti ayaa xerada ganaaxa gudaheeda si toos ah kubad hawada ku socotay gacanta ugu taabtay, taasoo sababtay in garsoorka uu ku ciqaabo rigoodhe waxaana gool u badalay Mile Jedinak oo ciyaarta ka dhigay barbaro 1-1, kahor inta uusan Pogba dhalinin goolka guusha.
Kadib ciyaarta Samuel Umtiti ayaa u muuqday midaan wax saameyn ah ku laheen goolkii rigoodha uu sabab ugu noqday xulkiisa qaranka France.
Umtiti ayaa kulanka kadib waxaa bartiisa Instagram-ka lagu daabacay sawirkiisa oo ka tarjumayay sida ciyaryahan ciyaaraya Basketball. sababa la xiriira kubadii uu gacanta ku taabtay.
"Riyo ayeey ii tahay ku guulaysiga koobka adduunka" - Philippe Coutinho
Muxuu ka yiri goolhaayaha xulka qaranka Iceland rigoodhadii uu ka bad baadiyay Messi?